Mon, Jul 6, 2020 at 5:46pm
छवि–शिल्पा विवाद : सँगै बस्ने सम्भावनाको अन्त्य
काठमाडौँ, २२ पुस चलचित्र निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलबीचको विवाद अदालतमा रहेको भएपनि यो विषयमा अझै किनारा लागिसकेको छैन । आपसी विवादमा छविले आफूमाथि कुटपिट गरेको कारण देखाउँदै शिल्पाले छविसँग जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । निर्माता ओझाले भने शिल्पासँग सम्बन्ध अव नजोडिने प्रतिक्रिया दिए । ‘शिल्पाले मविरुद्ध अदालतमा डिभोर्स र अंश मुद्दा हाल्नु भएको छ,’ उनले भने..
मलेसियाले समानरुपमा नेपाली र बंगलादेशका कामदार लैजाने
काठमाडौँ, २२ पुस मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया अनुरुप नै समानरुपमा बंगलादेशबाट कामदार लैजाने भएको छ । मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले नेपालसँग भएको श्रम सम्झौता जस्तै बंगलादेशसँग पनि सोही अनुरुप नै श्रम सम्झौता हुने बताएका हुन् । बंगलादेशसँग नयाँ श्रम सम्झौताका लागि द्विपक्षीय छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले अब हुने नयाँ सम्झौता नेपालसँग भएको सम्झौता जस्तै हुने बताएका हुन्..
श्रममन्त्रीका ३० दिनमा ३६ काम !
काठमाडौँ, २२ पुस श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको एक महिनामा भएका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । गत मङ्सिर ५ गते उहाँले श्रममन्त्रीका रुपमा पदबहाली गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र श्रम बजारमा पठाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।..
झन चुलिँदै कांग्रेसकाे आन्तरिक विवाद
काठमाडाैं, २२ पुस । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद झन् चर्किंदै गएको छ। संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, विभागको संख्या बढाउने र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विधानका केही धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चुलिँदै गएको हो। केन्द्रीय समिति बैठक नियमित बहिस्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल बढाएको..
देउवालाई पटक-पटक किन भेट्छन् प्रचण्ड ? नेकपाभित्रै शंका-उपशंका
काठमाडौं, २२ पुस । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटक-पटक भेट्ने गरेका छन् । प्रचण्डले देउबा भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका छन्। भेटमा सभामुख चयनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको छ। नेकपाभित्र सभामुखको चयनको सकस चलिरहेको बेलामा ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको हो। ओली र प्रचण्डबीचको भेटमा सभामुखको विषयमा छलफल भएको..
गृहमन्त्री थापा र चिनियाँ समकक्षीबीच भेटवार्ता
काठमाडाैं, २२ पुस । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर झु केझीबीच भेटवार्ता भएकाे छ । चीन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री थापाले चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री केझीसँग बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटवार्तामा आपसी हीत, सार्वजनिक सुरक्षामा द्विपक्षीय सहकार्य, अन्तरदेशीय अपराध, क्षमता अभिवृद्धि, सीमा व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भेटवार्तामा दुवै देशका मन्त्री कानुन कार्यान्वयन निकायहरूमा..
आज राजधानीका यी स्थानमा ७ घण्टा बत्ती जान्छ
काठमाडाैं, २२ पुस । आज 'मंगलबार' राजधानीका केही स्थानमा ७ घण्टा बत्ती जाने भएको छ। चक्रपथ विस्तार कार्यको लागी रुख कटान गर्न महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको ओम फिडरबाट वितरित लाइन विहान ९ बजेबाट ४ बजेसम्म सट डाउन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। ओम फिडरबाट वितरीत लाइन सट डाउन हुँदा सुकेधारा, न्यू कोलोनी, ढलाने पुल, निलो पुल, लगायतको क्षेत्रमा विद्युत प्रवाह रोकिने भएको हो। रुख..
सरकारले ताेक्याे माघ १ र २ सार्वजनिक बिदा
बुटवल, २२ पुस । प्रदेश ५ सरकारले आगामी माघी पर्वको अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। थारु र मगर समुदायको बाहुल्य रहेको प्रदेशमा आउने माघ १ र २ गते सार्वजनिक विदा दिन लागेको हो। गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले दुई नै विदा दिएको थियो। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले पुस २९ गते मुख्यमन्त्री निवास..
कांग्रेस मुख्यालय पौडेल समूहको कब्जामा नै परेको हो त ?
काठमाडौं, २१ पुस नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट नेताहरुले जिल्ला सभापतिहरुको छुट्टै भेला बोलाएका छन् । पार्टी मुख्यालय सानेपाको कार्यकक्ष प्रयोग गरेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा आयोजित जिल्ला सभापतिहरुको भेला भएको थियो । ११ पुसमा सभापति देउवाले एकलौटी रुपमा महाधिवेशनको मिति घोषणा, विभाग बिस्तार लगायतका निर्णयहरु गरेपछि असन्तुष्ट पौडेल समूहले जिल्ला सभापति भेला बोलाएको हो । सभापतिको परामर्शबाट देउवाविरुद्ध रणनीति..
नागढुंगाबाट चरेशसहित १ जना पक्राउ
काठमाडौं, १६ पुस नेपाल प्रहरीले नागढुङ्गाबाट चरेशसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभागबाट खटिएको टोलीले धादिङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको प्रदेश ३–०१–००५ ख ९५७३ नम्बरको यात्रुबाहक बसमा अवैधरुपमा चरेश ल्याउँदै गरेको अवस्थामा पर्सा छिपरमाई गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय शम्भु साहलाई आज दिउँसो पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरीवृत्त थानकोटका प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले झोलामा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा ५००..
'प्रचण्ड' अचानक सिन्धुपाल्चोक पुग्नुको कारण यस्तो छ
काठमाडौँ १६ पुस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष एवम पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आरमको लागि सिन्धुपाल्चोक आएका छन् । पार्टीका केही नेता सहित अध्यक्ष दाहाल बेलुकी सिन्धुपाल्चोक आइपुगेका हुन् । दाहाल यस अघि पनि रिफ्रेसका लागि बेला बेलामा सिन्धुपाल्चोक आउने गरेका थिए । यस अघि प्राय रिसोर्टमा बस्ने गरेका अध्यक्ष दाहाल यस पटक भने रिसोर्टमा नबसी व्यक्तिको घरमा बसेका छन्..
प्रचण्ड-देउवा वन टु वन भेटपछि झस्किए प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, २१ पुष संसदीय चुनावअघि माओवादीले काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापतिबीच तीनपटक मात्र वन टु वन छलफल भएको छ । यसपटक प्रचण्ड आफै देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगे । दुई घन्टा लामो वन टु वन भेटवार्ता गरे । भेटमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद सुचारु हुन नसकेको, संवैधानिक आयोगमा नियुक्त, विवादास्पद विधेयकलगायतमा छलफल भएको बुझिएको छ । देउवाले सरकारको कतिपय..
इरान अमेरिका युद्ध भए कस्तो असर पर्छ नेपाललाई ?
काठमाडौं, २१ पुष अमेरिकाले इरानका एक वरिष्ठ सैन्य नेतालाई इराकमा मारिदिएपछि अब युद्ध हुन्छ कि भन्ने चिन्ताका कारण पूरा विश्वको ध्यान अहिले ती दुई देश जारी तनाव परेको छ। अमेरिका र इरानले एकअर्कालाई सैन्य आक्रमणको धम्की कायमै राख्दा युद्धको असरबारे आँकलन हुन थालेको छ । यदी दुई देशबीच युद्ध भएमा नेपालपनि अछुतो हुने छैन । युद्धको मारमा सिंगो दक्षिण एसिया पर्नेछ ।..
बुढानीलकण्ठमा प्रचण्ड र देउवाबीच भेट, सभामुख चयनबारे छलफल
काठमाडौं, २१ पुष सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । आज विहान भएको भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै प्रतिनिधिसभाका सभामुख चयनबारे छलफल भएको प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएको छ । उता, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपता छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तीको विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ । संक्रमणकालिन न्याय..
जापानमा रोजगारी : 'झन्डै ८ हजार नेपाली आवेदकले भाषा र सीपको परीक्षा दिन पाउने'
काठमाडाैं, २१ पुस गत वर्षदेखि सुरु भएको नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रियालाई जापानले यो वर्ष थप तीव्रता दिने भएको छ । सन् २०१९ मा नर्सिङ केअरगिभरका लागि १,००० आवेदकले परीक्षा दिन पाएका थिए । अब वर्षभरि नै परीक्षा लिने कामलाई निरन्तरता दिइने जानकारी जापानले नेपाललाई गराएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । "जापानले एकदुई महिनाको फरकमा नेपाली कामदार लैजान परीक्षा लिने जानकारी गराएको छ । त्यसरी परीक्षा..
कांग्रेस विवाद : असन्तुष्ट पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको भेला आज
काठमाडौं,२१ पुस । नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्ष जिल्ला सभापतिहरूकाे भेला आज दिउँसो हुने भएकाे छ । रामचन्द्र पाैडेल पक्षले उक्त भेला आज दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गर्ने भएकाे हाे । सभापति शेरबहादुर देउवाको कदमविरुद्ध लड्न भन्दै पौडेल पक्षले आफू पक्षीय जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको छ। भेलामा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरु काठमाडौँ पुगिसकेका छन् । सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले पेलेर जान खोजेकोले जिल्ला सभापतिहरुसँग छलफल..
हेटौंडा राजधानी : नेकपाका सांसदकाे विवाद
काठमाडाैं, २१ पुस । सत्ताधारी नेकपा सचिवालयले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि सो पार्टीका कतिपय सांसदलाई यसको पक्षमा बोल्ने कि विपक्षमा सकस भएको छ । त्यसैले, हेटौडामा प्रदेश ३ को नेकपा संसदीय दल बैठक तीन दिनसम्म चल्यो तर, राजधानीबारे निर्णय हुन सकेन । नेकपा प्रदेश प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुँयालले बैठकले प्रदेश राजधानीबारे निर्णय गर्न नसकेको बताए । सांसदहरुले प्रदेश राजधानीका..
प्रदेश ३ को राजधानीमा नेकपा अनिर्णित
आईतवार, पौष २०, २०७६ साल
हेटौँडा, २० पुस नेकपा प्रदेश-३ को संसदीय दलको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन ३ दिनदेखि बसेको बैठकमा सांसदको बोल्ने क्रममा नसकिएपछि २२ गतेसम्मलाई स्थगित भएको मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिए। बैठकमा सहभागी सांसदले प्रदेश-३ को राजधानी र नामकरण विषयमा पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्ने तर्क गरेका थिए भने काभ्रेका सांसद चन्द्र लामाले भने नेतृत्वले निर्णय सच्याउनु पर्ने..
यी हुन् राष्ट्रियसभा निर्वाचनका ४५ उम्मेदवार
काठमाडौं, २० पुस राष्ट्रिय सभा सदस्यको १८ पदका लागि आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि मुलुकका सातै प्रदेशमा आइतबार भएको उम्मेदवारी मनोनयपत्र दर्ता शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । आगामी फागुन २०..
कांग्रेसको विवाद जटिल मोडमा, असन्तुष्ट पक्षको अलग्गै भेला !
काठमाडौं, २० पुस असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापतिकै अलग्गै भेला बोलाएपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले जटिल मोड लिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक र छलफल बहिष्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यलय सानेपामै सोमबार भेला बोलाएको हो। देउवाका कदमविरुद्ध स्थानीय तहलाई सूचित र सचेत गर्नका लागि असन्तुष्ट समूहले भेला आयोजना गरेको हो। जिल्ला सभापतिहरुसँग छलफल र परामर्शपछि देउवाविरुद्धको कदमबारे असन्तुष्ट पक्षले..
३८ दिनपछि डिस्चार्ज भएर आश्रम पुगे ‘सिद्धबाबा’
काठमाडौं, २० पुस बलात्कारको आरोप लागेका ‘सिद्धबाबा’ कृष्णबहादुर गिरीलाई विराटनगर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको छ। ३८ दिनअघि उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका गिरीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदै गएको जनाउँदै उपचारमा संलग्न वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले डिस्चार्ज गरेको जानकारी दिए। सिद्धबाबालाई डा. गिरीले ‘माइनर हटअट्याक’ भएको बताउँदै उपचार गर्दै आएका थिए। गत मंसिर १२ गतेदेखि अस्पतालको सुविधासम्पन्न डिलक्स रुममा बस्दै आएका गिरीलाई..
नेकपाले गर्‍याे केन्द्रीय कमिटीकाे बैठक सार्ने तयारी
काठमाडौं, २० पुस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा'ले आइतबार बिहान ९ बजे सचिवालयको बैठक बोलाएको छ । नेकपाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्ने तयारी गरेको हाे । आसन्न राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्नुपर्ने देखिएको नेकपा स्रोतले जानकारी दियो । “राष्ट्रियसभाको चुनावको उमेदवारी दर्तादेखि निर्वाचन तयारीसम्म गर्नुपर्नेछ । एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन भएकाले तलतलसम्म प्रचार पनि गर्नुपर्‍यो, त्यसैले तयारी पनि अपुग हुनसक्छ, यद्यपि..
इरानी कमाण्डर सुलेमानी हत्यापछि इराकमा रकेट हमला
एजेनसी, २० पुस । इराकी सेनाले इराकको राजधानी बगदादसमेत विभिन्न इलाकामा रकेट हमला भएको जानाकारी दिएको छ । यी रकेट हमला अमेरिकी दूतावास नजिकैको ग्रीन जोन, बगदाद नजिकैको जदरिया र अमेरिकी सुरक्षाबल भएका बलाद एयरबेसमा भएको हो । सेनाले यी हमलामा कसैको पनि मृत्यु नभएको बताएको छ । इरान समर्थित मिलिशिया लडाकूले केही हप्ताअघि यस्तो हमला गरेको थियो । तर अब अमेरिकाको हवाइ..
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : आज उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै
काठमाडौं, २० पुस । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आज 'आइतबार' उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । राष्ट्रियसभा सदस्यकाे निर्वाचन आगामी माघ ९ गते हुने भउकाे छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका १९ जनाको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ । त्यसमध्ये १८ जनाको निर्वाचनको माध्यमबाट र एक जना सरकारको सिफारिशमा..
देउवाको विकल्प : शशांक कि शेखर ?
काठमाडाैं, २० पुस । राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारामा नेकपासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नरम लोकतान्त्रिक छवि भएको पार्टी बन्ने–कांग्रेसभित्र अलमल देखिन्छ। सिंगै विश्वमा देखिएको उदारवादी विचारको संकटले कांग्रेसलाई समेत प्रभावित पार्नु अनौठो नभएको आकलन विश्लेषकहरु गर्छन्। महामन्त्री शशांकले आफ्ना पिता तथा पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाले अगाडि सारेको धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने साहस गर्नु यसैको प्रतिफल भएको उनीहरुको ठहर छ। शेखर केही भिन्न देखिन्छन्। ०६२ मा..
सभापति देउवा महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न खोज्दैछन् : नेता केसी
शनिबार, पौष १९, २०७६ साल
तनहुँ, पुस १९ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी नेतृत्व एकलौटी चल्न खोजे पार्टीलाई घाटा पुग्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस तनहुँले शनिवार दमौलीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले वर्तमान नेतृत्व एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाए । नेता केसीले विधि, विधान मिचेर अगाडि बढ्दा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै सहमतिबाटै पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पार्टी..
प्रदेश ३ को नाम र राजधानी आगामी प्रदेशसभा बैठकले पारित गर्ने निर्णय
हेटौंडा, पुस १९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश नं ३ को संसदीय दलले आगामी प्रदेशसभा बैठकले राजधानीको नाम र स्थानको विषय पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठक यही पुस २१ गते बस्दैछ । नेकपा सचिवालय बैठकले स्थायी राजधानी हेटौँडा र नाम वाग्मती राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री निवासमा शनिवार बसेको दलको बैठकमा राजधानीको नाम र स्थान सहमतिमै टुङ्ग्याउनुपर्ने..
राष्ट्रियसभा उम्मेदवारी दर्ता आइतबार
काठमाडौं, १९ पुष निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सांसदको उम्मेदवार दर्ताका लागि आइतबार १० देखि ३ बजेको समय निर्धारण गरेको छ। सात प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका जिल्लामा आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। राष्ट्रियसभामा रिक्त १८ पदका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हने एक पद भने पछि सरकारको सिफारिसमा मनोनित गरिनेछ। सत्तासीन नेकपा र प्रमख विपक्षी कांग्रेसले आ–आफ्ना दलका उम्मेदवार तोकिसकेको..
राजपाले टुंग्यायो राष्ट्रियसभा उम्मेदवार
काठमाडौं, १९ पुस राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवार टुंग्याएको छ। पार्टी मुख्यालय बबरमहलमा शनिबार बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मृगेन्द्र सिंह यादव र शेखर सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका यादवलाई प्रदेश–२ को अन्य समूहबाट र अल्पसंख्यक÷अपांगता भएका समूहबाट सिंहलाई सर्वसम्वत चयन गरिएको छ। माघ ९ गते १८ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। पुस..
आईतबारबाट काठमाडौंसहित देशभरको मौसम सुधारिने
काठमाडौं, पुस १९ आईतबारबाट देशभरकै मौसम सुधारिने प्रक्षेपण मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । यद्यपि, शनिबार दिउँसो र साँझपख केही स्थानमा वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ । पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभावले केही दिनयता पहाडी भागमा वर्षा तथा हिमाली भागमा भारी हिमपात भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार, आईतबारबाट यो क्रममा सुधार आउने छ । बुधबार पश्चिमी भू–भाग हुँदै प्रवेश गरेको नयाँ मौसम प्रणाली..
Results 9755: You are at page 46 of 326